Magway Region Supreme Court - တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံ
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ပြည်ထောင်စု တရားစီရင်ရေးဥပဒေတို့အရ တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့မှစ၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်ကို ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သည် ဆားရွှေကင်းရပ်၊ ရုံးလမ်း ၊ မကွေးမြို့ မြောက်လတ္တီတွဒ် 20 ° 1402958 အရှေ့လောင်ဂျီကျု 94 ° 9242777 ၊ အကျယ်အဝန်း ၁.၀၉၁ ဧရိယာ ရှိပြီး ၃၁.၃.၂၀၁၁ ရက်နေ့မှ ယနေ့အထိ တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဦးစိန်ထွန်း နှင့် တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး ဦးမြင့်သိန်း၊ တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး ဒေါ်နုယဉ်တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် တရားမမှုနှင့် ရာဇဝတ်မှု(၂)မျိုး၏ မူလမှုများကို ကြားနာခွင့်ရှိပြီး လက်အောက်ခံတရားရုံးများက ချမှတ်သည့် စီရင်ချက်၊ ဒီကရီနှင့်အမိန့်များ အပေါ် အယူခံနှင့်ပြင်ဆင်မှု စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာများလည်း ရှိပါသည်။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ရှိ အမှုများကို တရားသူကြီး (၁) ဦး (သို့မဟုတ်) လိုအပ်ပါက တစ်ဦးထက်ပိုသော တရားသူကြီးများဖြင့် စစ်ဆေးပါသည်။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သည် မိမိစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လက်အောက်ခံ တရားရုံးများအားလုံး၏ တရားစီရင်ရေးတာဝန်များအပေါ် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ ကြီးကြပ်ရန်တာဝန်ရှိပါသည်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် လက်အောက်တွင် ခရိုင်တရားရုံး (၅) ရုံး၊ မြို့နယ်တရားရုံး (၂၅) ရုံးရှိပါသည်။ ခရိုင်တရားရုံးများမှာ မကွေးခရိုင်တရားရုံး၊ ပခုက္ကူခရိုင်တရားရုံး၊ သရက်ခရိုင်တရားရုံး၊ မင်းဘူးခရိုင်တရားရုံး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင် တရားရုံးတို့ဖြစ်ပါသည်။ မကွေးခရိုင်အတွင်း၌ မြို့နယ်တရားရုံး (၆) ရုံးရှိပြီး မကွေးမြို့နယ်တရားရုံး၊ ရေနံချောင်းမြို့နယ်တရားရုံး၊ ချောက်မြို့နယ်တရားရုံး၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်တရားရုံး၊ နတ်မောက်မြို့နယ်တရားရုံး၊ မြို့သစ်မြို့နယ်တရားရုံး တို့ဖြစ်ပါသည်။ ပခုက္ကူခရိုင်အတွင်း၌ မြို့နယ်တရားရုံး(၅)ရုံးရှိပြီး ပခုက္ကူမြို့နယ်တရားရုံး၊ ရေစကြိုမြို့နယ် တရားရုံး၊ မြိုင်မြို့နယ်တရားရုံး၊ ပေါက်မြို့နယ်တရားရုံး၊ ဆိပ်ဖြူမြို့နယ်တရားရုံး တို့ဖြစ်ပါသည်။ သရက်ခရိုင်အတွင်း၌ မြို့နယ်တရားရုံး(၆)ရုံးရှိပြီး သရက်မြို့နယ်တရားရုံး၊ အောင်လံမြို့နယ်တရားရုံး၊ ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ်တရားရုံး၊ ကံမမြို့နယ်တရားရုံး၊ မင်းလှမြို့နယ်တရားရုံး၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်တရားရုံး တို့ဖြစ်ပါသည်။ မင်းဘူးခရိုင်အတွင်း၌ မြို့နယ်တရားရုံး(၅)ရုံးရှိပြီး မင်းဘူးမြို့နယ်တရားရုံး၊ ပွင့်ဖြူမြို့နယ်တရားရုံး၊ စလင်းမြို့နယ်တရားရုံး၊ ငဖဲမြို့နယ်တရားရုံး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်တရားရုံးတို့ဖြစ်ပါသည်။ ဂန့်ဂေါခရိုင်အတွင်း၌ မြို့နယ်တရားရုံး (၃)ရုံး ရှိပြီး ဂန့်ဂေါမြို့နယ်တရားရုံး၊ ထီးလင်းမြို့နယ် တရားရုံး၊ ဆောမြို့နယ်တရားရုံးတို့ ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် ( National Case Management Program - NCMP) ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
Copyright © 2019 High Court of Magway Region. All Rights Reserved.
Email : magway.hc@mptmail.net.mm